DegDeg : Senater Cabdi qaybdiid ” Muqdisho dagaal ka dhici maayo – MANABOLYO NEWS
DegDeg : Senater Cabdi qaybdiid ” Muqdisho dagaal ka dhici maayo
in Culture, National, News, Opinion, Politics
DegDeg : Senater Cabdi qaybdiid ” Labada maamul ee raba in muqdisho dagaal kadhoco waxanu usheegaynaa dagaal dhici maayo doorshaduna wakhtigii loo qoray bay dhacaysa waddankuna madaxwayne ayuu leeyahay “
Taageerida Dowlada Farmaajo ayaa muuqata in ay ka soo kabsaneeyso jalaafadii loo dhigay. iyadoo siyaasiin badan ay media yaha hor yimaadeen ayagoo shacabka deginaayo. islamarkaasna mooqifkooda ay banaanka usoo saareeyn.
Xildhibaanad Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa shaley kasoo muuqatey Media yaha dalka iyadoo taageero weyn u heeysa Dowlada Maxamed Abdullahi Farmaajo.
Si kastaba ha ahaatee arintaan ayaa ah mid qatarteeda leh iyadoo wadanka uu mar hore kala go’san yahay oo markaad gudaha wadanka u safreeysid ay tahay in aad diyaarad raacdid si aad ugu gudubtid Gobol kale.
Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ayaa loo doortay gudoomiye cusub.
Dhakhaatiirta Isbitaalka Banaadir : Hooyo 7 sano cunug caloosha ku sidday.
Puntland oo shuruudo adag ku xirtay ka qeyb galka shirka wadatashiga Qaran (Akhriso)
UN: DFS iyo Saamileyda siyaasada ka codsatay inay wada-hadlaan
Soomaalida degan S/Africa oo walaac badan soo food saartey. kadib
Wareeysiga Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni
Wacyi gelin ku saabsan Covid-19 – Qeybta kala fogaanshaha & Nadaafada